तेह्रदिने कर्मकाण्ड ः अन्धविश्वास र कुसंस्कारको निरन्तरता – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
तेह्रदिने कर्मकाण्ड ः अन्धविश्वास र कुसंस्कारको निरन्तरता
२०७१ माघ २९, बिहीबार ०६:५४ गते
मानिसले जीवनको अन्तिम क्षणमा कुनै न कुनै परिघटना वा रोगको सामना गर्नैपर्दछ । त्यो प्राणको बाजी राखेर गर्ने जीवन संघर्षमा एक दिन सबैले हार्नैपर्दछ र मृत्यु वरण हुन्छ । यसरी नै हार्नेक्रममा लामो समयसम्म पक्षाघात भएर थलिनुभएका मेरा ९० वर्षीय पिताले पनि जीवन संघर्ष हार्नुभयो । यही २०७१ माघ २२ गते उहाँको देहावसान भयो । कुनै मानिस जन्मनु–मर्नु केही अनौठो भएन । तर, अनौठो के भयो भने मेरो अध्ययनमा कुनै मृतक गएर बस्ने वैकुण्ठ ब्रह्माण्डमा कतै फेला नपरेकोे हुँदा त्यो काल्पनिक स्वर्ग पठाउने १३ दिने काजक्रिया गर्न मलाई आत्मैदेखि स्वीकार्य भएन । घरका सबै परिवार पनि मेरो मतमा सहमत भए । पिताको निधनपछि परिवारजन र नजिकका आफन्तहरुको आकस्मित बैठक बस्यो र सातवटा निर्णय गरियो ।
१) पिताको पार्थिव शरीर आधा दिनसम्म घरमै सजाएर राख्ने र मुख हेर्न चाहने टाढा रहेका घरका परिवार, बन्धुबान्धव, नाता आफन्त सबैलाई प्रत्यक्ष श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने अवसर दिने ।
२) जान सक्ने सबै परिवारका सदस्यले घाटमा गएर सम्मानसाथ अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न गर्ने ।
३) कपाल काट्ने, सेता लुगा फेर्ने, कोरा बस्ने, नुन छाड्ने, भोको बस्ने, आफूले आफैँलाई जूठो तथा अछूत घोषणा गरेर छुवाछूतको व्यवहार गर्नेजस्ता सबै परम्परा त्याग्ने र कुनै प्रकारको दान, दक्षिणा, भेटी लिने–दिने नगर्ने ।
४) राजनीतिक दर्शन, समाजशास्त्र, विज्ञान तथा धर्मशास्त्रका विज्ञ प्रबुद्ध व्यक्तिहरु समेतका बीचमा सामाजिक संस्कारसम्बन्धी व्यापक बहस गर्ने र शोक तथा अन्तिम श्रद्धाञ्जली सभा गरेर १३ दिने कार्य ३ दिनमा सम्पन्न गर्ने ।
५) प्रत्येक वर्षको एकपटक मातापिताको सम्झनामा स्मृति सभा गर्ने ।
६) जेठो छोरा रणेन्द्र बरालीद्वारा लिखित ‘हाम्रो संस्कार’बारेको पुस्तकको पाण्डुलिपि प्रकाशन गर्ने ।
र, ७) २०६९ सालमा माता अमृता र पिता झिमलालको नाममा स्थापना गरेको झिमामृत अक्षय कोषलाई प्रभावकारी बनाउने ।
मानिसको मृत्यु आफैँमा एउटा हृदयविदारक घटना हुन्छ । यो दुःखद अवस्थामा मृतकका परिवार तथा आफन्तजनले दिवंगत भएका आफन्तको माया–स्नेहका कारण कुनै पनि मूल्य चुकाएर वियोगको पीडा पखाल्न चाहन्छन् । पीडाले पोलेको मन शान्त पार्न तयार हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । उक्त मौका छोप्दै शोकसन्तप्त अवस्थाका परिवारप्रति धर्मको नाउँमा मिलेसम्मको कुसंस्कार कोचिन्छ । पूर्वजन्म, स्वर्ग, नर्क, वैकुण्ठ, मुक्ति, मोक्ष, पाप, पुण्य आदिको परिकल्पना गरेर पुरोहितले शोषण गर्ने परम्परा छ, हाम्रो समाजमा । कोरीमा क्रियापुत्री राखेर गरूडपुराणको नरक आतंक सुनाएर तर्साएर मृतकलाई स्वर्ग तार्ने नाममा महाशोषण गरिन्छ । आजको युगमा यी कार्य कतिका यथार्थपरक छन् त ? सबैले निधार खुम्च्याएर सोंच्न जरूरी छ ।
मान्छे जन्मेपछि मर्न जति अनिवार्य छ, त्यति नै अनिवार्य छ मृत्यु संस्कार कार्य गर्न । कुनै न कुनै विधिबाट अन्त्येष्टि कार्य त गर्नैपर्ने हुन्छ । हाम्रो समाजमा अहिले गम्भीर चुनौतीको विषय के बनेको छ भने जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कर्मकाण्ड मूलतः हिन्दूधर्मको मान्यताअनुसार नै गरिन्छ । इतर हिन्दूहरुले पनि आ–आफ्ना किसिमका आध्यात्मिक परम्पराअनुसार नै कर्मकाण्ड गर्दछन् । यस्ता कार्यका लागि आहिलेसम्म कुनै आधुनिक, वैज्ञानिक तथा भौतिक विधि स्पष्ट निर्धारित र स्थापित भएका छैनन् । तथापि, नेपाली समाजमा आध्यात्मिकवादको गलत पक्षलाई पन्छाएर भौतिकवादलाई आत्मसात् गरी मृत्यु संस्कारमा हिन्दूधर्म परम्परा चिर्र्ने बहादुर व्यक्ति थिए, प्रजातन्त्रवादी नेता तथा साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला । उनले आफ्नो मृत्युपश्चात् श्रीमती र छोरालाई परम्परागत क्रिया कार्य गर्न उचित छैन, नगर्नू भन्ने घोषणा गरे । यो ज्यादै राम्रो कामको थालनी थियो । त्यसपछि आजपर्यन्त धेरै नेता, बुद्धिजीवी तथा साहित्यकारहरुले परम्परागत क्रिया नगरी उहीदिन, ३ दिन, ५ दिन, वा ७ दिनसम्ममा सकिने गरी कर्म गरे । परिवर्तित ढङ्गले शोक कार्यक्रम गरेर श्रद्धाञ्जली दिने चलन क्रमशः विकास भएर आएको छ । यसलाई प्रश्रय दिन व्यापक छलफलको विषय बनाउन जरूरी छ ।
हिन्दूधर्मकै आधारमा पनि सुधार गरेर मृत्यु संस्कार ५ दिनमा सक्न मिल्छ भन्ने अभियान चल्न सुरू भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तारा पोखरेलले पिताको काजक्रिया ५ दिनमा सके । धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धुको मान्यतामा नै कार्य भएको अन्य वैदिक मान्यताविपरीत नभएको भन्दै पुरोहितले अर्थ लगाए । उक्त पाँचदिने अभियानमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नेमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भोजराज पोखरेल, लोकसेवा आयोगका टीकादत्त निरौला, पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश काशि पोखरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति विभागकी प्राध्यापक निर्मला पोखरेल र राजनीतिक पार्टीका नेता र पत्रकारहरु समेत रहेका थिए ।
हिन्दू धार्मिक परम्पराको क्रिया कार्य विधिलाई थोरै चर्चा गर्नुपर्दा, गरूडपुराण दोस्रो अध्यायका अनुसार बखान गरिन्छ कि “जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ, तब बाचुन्जेल गरेको आफ्नो पापकर्मको कारण ऊ प्रेत बनेर नर्कमा भौँतारिइरहेको हुन्छ । नर्क कुण्डलीबाट निस्कनका लागि ऊ यमराजको ढोकामा गएर बिन्ती बिसाउन चाहन्छ । त्यसका लगि सर्वप्रथम जिन्दगीको खाता हेर्न र पाप–पुण्यको फाँटवारी सुन्न चित्रगुप्तकोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ मृतकलाई । त्यहाँ पुग्नका निम्ति उसले वैतर्नी नदी तर्नुपर्दछ । नदीमा सिँगान, पीप, दिसापिसाबजस्ता अचाक्ली फोहोरको लेदो भकभक उम्लेर बगिरहेको हुन्छ । अझै त्यसभित्र गोही, अजिंगर, सर्प, बिच्छीजस्ता हिंस्रक मांसाहारी जलजीवहरु दाह्रा–नंग्रा फैलाएर बसेका हुन्छन् । यमदूतले त्यही नदीमा हेलिदिन्छ, मृतकलाई । ती डरलाग्दा जनावरहरुले चिथोर्दै र कोपर्दै गर्दा त्यहींँमाथि यमदूतले बाहिरबाट फलामको मुग्रो र भालाले हान्छ । यो यातना भोगिरहंँदाका बखत गौदान गरेमा गाईको पुच्छर समातेर वैतर्नी नदी तर्न सकिने उपाय बताइन्छ । यस्ता अनेक त्रासदी देखाएर मृतकका शोकाकुल परिवारको ध्यान विक्षिप्त पारिन्छ । त्यसरी नर्कमा अत्तालिएर कहालिइरहेका पितृ तार्नका लागि गौदान किन नगर्ने ? गर्नैपर्ने बाध्य पारिन्छ । यदि ऊ गरिब छ र भनेजति दानपुण्य गर्न सक्दैन भने फेरि चण्ड, मुण्ड, प्रचण्ड आदि अनेवm नामका यमदूतहरु आएर नाक–कानमा बल्छी लगाएर साङ्लाले कसेर राङ्राङ्तै बलेको आगोको भुभ्रोबाट र भाला, तीर, तरवार, ठड्याएर राखेको मझधारबाट घिसार्दैै लतार्दै लान्छन्, अझै ठूलो घनले थाप्लामा ठोक्दै र रगत छँदाउँदै, त्यही रगत चटाउँदै अगाडि लगिन्छ (गरूडपुराण दोस्रो अध्याय, पृष्ठ २०) । एवं रीतले पितृले कष्ट काटिरहेको सुनाइन्छ । सोबाट मुक्ति दिलाउन धनपैसा चढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, मृतकका आफन्तले । अझै दानद्रव्य नपुग्दा हातखुट्टा बाँधेर भलभली तेल उम्लेको तातो कराहीमा उँधोमुन्टो पारेर मृतक पितृलाई च्वाइच्वाई चोबिन्छ । ठूला आराले टाउकोबाट चरचरी चिरिन्छ, छरछरी रगत आएर छटपटिंँदा झन् झिरमा उनेर बटारिन्छ, जिउँदै गिद्ध र स्यालले लुछेको जस्ता यावत् कृत्य पुराणमा सुनाइन्छ । भूमिदान, सुनदान, चौपायादान, द्रव्यदान, हाँडाभाँडा, वस्त्र आदि इत्यादि सम्पूर्ण दानले पुरोहित भरिपूर्ण भएपछि मात्र धर्मराजको ढोकामा पुगेर फैसला सुन्न पाउँछ मृतकले । बाबुले कमाएको सम्पत्ति सबै दान ग¥यो भने सन्तानले समेत मोक्ष पाउँछन् भनिएको छ पुराणमा (गरूडपुराण आठौँ अध्याय, ८९ पेज) । दानदक्षिणामा कुनै कमी भएमा पितृ तर्न पाउने चान्सै हुँदैन । नत्र, फेरि नर्कतिर फर्केर गुहुमा गज्जाङगज्जाङ चल्ने गुह्येकीरा, फट्यांग्रा आदिको जन्म लिनुपर्ने हुन्छ ।” (गरूडपुराण आठौँ अध्याय) यस्ता वाहियातका काल्पनिक कुरा सुनाएर धर्मको नाममा दान लिएर क्रूरतम् शोषण गरिन्छ ।
मृतकका आफन्तले १३ दिनसम्म सिलाएको लुगा लगाउन नहुने; नुन, दाल, तरकारी खान नहुने, निस्तो भात एक छाक खाएर अछूत भएर क्रिया बस्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले जातिअनुसार राँगा, सुँगुर तथा खसी काटेर जाँडपानीमा डुब्ने चलन पनि छ । ४५ दिनसम्म विभिन्न चीज वर्जित गरी कष्ट काट्नुपर्ने र वर्षभर सेतो पहिरन पहिरेर दुःख बोकेको भन्दै बरखी बस्ने त छँदैछ ।
दश मासांस्तु तृप्यन्ति
वराह महिषामिषैः ।
–सुँगुर र भैँसीको मासुले दस महिनासम्म, खरायो र कछुवाको मासुले ११ महिनासम्म पितृहरु तृप्त रहन्छन् ।
अर्को ठाउँमा भनिएको छ, कालाशाक नामको एक जातको शाग, ठूलो जातको समुद्री झिँगे माछाको मासु, गैँडाको मासु, रातो खसीको मासु, नीवार आदिको मासुले पितृ अनन्त कालसम्म तृप्त रहन्छन् । (हिन्दूजातिको उत्थान र पतन, पृ. ९२.) यसरी दान र तर्पनको निहुँमा मीठामीठा परिकार खाने युक्ति निकालेका हुन्छन्, पुरोहितहरु । सबैको घरमा एक दिन गर्नैपर्ने नित्यकर्म भएको हुनाले यी रुढीगत संस्कार फेर्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने कुरा आममानव सरोकारको विषय बनेको छ ।
जन्मदेखि मृत्युसम्मका नेपाली समाजमा प्रचलित संस्कारलाई परिमार्जन होइन, विकल्प दिएर परित्याग नै गर्नु जरूरी हुन्छ । जस्तै, बाटोको बीचमा दिसा गर्ने गाउँलेहरुले छेउमा दिसा गरेर अब खुट्टाले टेकिने भएन, परिवर्तन भयो भनेर सुधार गरेको ठीक मान्न सकिँदैन । चर्पी बनाएर बाटोलाई दिसामुक्त पार्नुपर्दछ । त्यसलाई मात्र परिवर्तन मानिन्छ ।
अहिले हाम्रो समाजमा आधुनिकताको बर्को ओढाएर पुरातन संस्कारलाई झनै प्रश्रय दिएको पाइन्छ । यहाँसम्म कि कतिपय ठाउँमा कसैको मृत्यु भयो भने देख्न, भेट्न जानेले पार्थिव शरीरमा पैसा चढाउन पर्ने । कोरा बस्नेलाई समवेदना दिन जाँदा भेटी टक्र्याउने बीचको प्रतिस्पर्धामा हजारौं, लाखौँसम्म बढाबढ गरेर थैली चढाउन पर्ने । अन्न पासनी, विवाह, व्रतबन्धको अवसरमा समेत सम्बन्धित पात्रलाई मात्र होइन, उनका बाबुआमालाई समेत नगदले पुरस्कृत गर्नुपर्ने चलन बढेको छ । यस किसिमको सामाजिक विकृति बढ्ने खतरा भएकाले पनि उचित विकल्प दिएर सांस्कृतिक रुपान्तरणको आन्दोलन छिटो अघि बढाउन जरूरी देखिन्छ ।
सद्गतको काम सकेपछि शोकसभा गर्ने र क्रिया, कष्ट, दस पिण्ड, तेह्र्रदिने, पैँतालीसदिने, वर्षदिने सबै कर्मकार्य सकिएको घोषणा गर्दा हुन्छ । शवयात्रा (मलामी) मा सामेल हुने तथा समवेदना दिन आउने सबैलाई सामान्य चियाखाजा ख्वाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसपछि अनुकूल मिले तत्कालै, नभए ३, ७, १५ दिन वा १ महिना तथा वर्षदिनभित्र समय मिलाएर मृतकको सम्झनामा स्मृति सभा गर्दा जाती हुन्छ । यसपछि मृतकले समाजमा राम्रो वा मानवहितका नयाँ काम गरेको भए त्यसको अनुसरण गर्नुबाहेक केही बाँकी रहँदैन । महिलाले चुरापोते र राता लुगा त्याग्ने, सेता कपडामा क्रिया बस्ने, बरखी बसी नुन बार्ने, महिनौँ वा वषौँ कामकाज छाड्नेजस्ता वाहियातका प्रचलन त्यागेर सभ्य समाजको चिनारी दिनु आजको आवश्यकता हो ।
बरू, सक्नेले गर्न के जाती हुन्छ भने कसैको आफन्त भीरबाट मोटर खसेर दुर्घटनामा परेर देहावसान भएको भए फेरि अर्को गाडी नखसोस् भनी त्यस ठाउँमा पर्खाल लगाइदिने वा रुख रोपिदिने, कुनै रोगका कारणले असामयिक निधन भएको भए त्यस रोग निवारण सम्बन्धित संस्थालाई आर्थिक सहयोग पु¥याउने, अथवा सामाजिक संस्थामा अक्षय कोष खडा गरी असहाय बालबालिकाहरुलाई पठनपाठनमा सहयोग पु¥याउने । मृत्यु भएका व्यक्तिका नाउँमा साझा स्थानमा तथा घरछेउमा रुख तथा बोटबिरूवा रोप्ने सके जमिन भए बगैँचा नै बनाइदिने । मृतकको नाममा खर्च गरेर पुण्य कमाउन चाहनेले यस्ता काम गर्दा सिंगो समाजको भलो हुन्छ ।
हिजोआज विज्ञानले मानवसेवामा एउटा नयाँ आविष्कार थपेको छ । त्यो हो, अंगदान जसमा मृत्युपश्चात् आँखा, मृर्गौला, मुटु वा शरीरको कुनै अंगदान गर्न सकिन्छ । कसैको जीवनरक्षा हुन्छ भने त्यो जीवनदान कुनै पनि दानदक्षिणाभन्दा अमूल्य हुन्छ । कम्तीमा हामी विज्ञानमा विश्वास गर्ने प्रगतिवादीहरुले माथि उल्लिखित कर्म गर्न हिम्मत गरौँ । आफ्नो परिवार र समाजमा आजैदेखि यसबारेमा बहस गरौँ । मेरो त मृत्युपश्चात् यही कर्म गर्नू है भनेर इच्छापत्र दिने प्रचलनको विकास गरौँ ।